Iqubula imibuzo eyokushiswa kwezikole - Ilanga News
Home Izindaba Iqubula imibuzo eyokushiswa kwezikole
Iqubula imibuzo eyokushiswa kwezikole
KUBONAKALA kukhona okushaya amanzi ngokushiswa kwezikole iNingizimu Afrika yonke kulesi sikhathi esinzima sokuvalwa kwezwe ngenxa yobhubhane
i-coronavirus, oseluzamazamise umhlaba wonke. Sekungqongqiswe inqwaba yezikole, ikakhulukazi eGauteng naKwaZulu-Natal, kodwa okuqubula imibuzo wukuthi kungani izinswelaboya zigila lo mkhuba ngalesi sikhathi.
Okunye okuxakayo wukuthi abenzi bobubi kabathathi lutho; ezigamekweni esezike zenzeka esikhathini esidlule, bekuvame ukuthi abantu
abangenanembeza bacwiye izikole zomphakathi ngokuzitapela amawindi, uphahla, izicabha nokunye okuningi, kusale izindonga kuphela.
Kulokhu izelelesi zibhubhisa ngomlilo isikole, kodwa zingantshontshi lutho. Ngabe kusho ukuthini lokhu? Yingani kushiswe izikole kodwa ezinye
izakhiwo zomphakathi zona zingenziwa lutho?
Sekunemibono eminingi eyehlukene ngomsuka walobu bugebengu; omunye wale mibono ozwakala unesisindo wukuthi izinswelaboya zisuke zithunywe ngosomathuba abangenanembeza abaphila ngamathenda kahulumeni.
Ngokwalo mbono, inhloso yokungqongqisa izikole kusuke kuyiqhinga lokudala umsebenzi; osomathuba bazi kahle ukuthi izikole yizikhungo ezibalulekile kubo bonke abantu, ngakho uma isikole sicekelwe phansi, uhulumeni wenza imizamo yokuthi sakhiwe ngokushesha ukuze izingane zikwazi ukuthola imfundo.
Osomathuba bayazi ukuthi uma uhulumeni ungasilungisi isikole, kusuka umsindo nemibhikisho umphakathi ukhala ngokuthi uhulumeni kawulikhathalele ikusasa lezingane zawo.
Umbuzo okufanele yonke imiphakathi eshiselwa izikole zayo izibuze wona uthi; yikuphi yona ekwenzayo ukuvikela izikole nezinye izakhiwo zomphakathi ezindaweni zayo?
Okudumazayo wukuthi esikhathini esiningi imiphakathi ethintekayo isuke izazi izigilamkhuba ezilimaza impahla yawo, kodwa ingenzi lutho ukubikela abomthetho ngalokhu.
Iqiniso okufanele singalibalekeli wukuthi kunesifo esibi esihlasele ikakhulukazi indlu empisholo, sokujwayela ukubheka uhulumeni ukuba usenzele yonke into, thina sigoqe izandla.
Lo mkhuba wokulimaza impahla yomphakathi uyophela mhlazane sonke sabambisana ngokulwa nalobu bugebengu ngokuba sibakhiphe inyumbazana abenzi bobubi, futhi sibikele abomthetho uma lesi sihlava senzeka ezindaweni esihlala kuzona.
Uhulumeni nawo kufanele uyithathele phezulu le ndaba ngokuba ujube ithimba elikhethekile lamaphoyisa ukuphenya lezi zehlakalo, ukuze kuboshwe le migulukudu ebulala ikusasa lezingane zethu ngezenzo zayo zobumnyama.
Previous articleMasifunde ukufingqa imikhono, singathembeli kubaqashi kuphela
Next articlei-corona ifike nenselelo entsha kwi-ada